Mgbaze agbaze nwere ike inyere aka mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Agbaze snow nwere ike inyere obere mgbanwe ihu igwe aka
E nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche na - emetụta okpomoku ụwa na mgbanwe ihu igwe. Mgbe ụfọdụ enwere ihe ịtụnanya nke n’eme ka mmụba pụta, mana n’oge ndị ọzọ, ihe na - eme na - esokwa na mma ya.
Agbanyeghị na ịrị elu okpomọkụ nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na-eme ka snow gbazee tupu oge opupu ihe ubi, nke a na-enye ohere oke ohia nwere ike itinyekwu carbon dioxide nke ikuku. Kedu ka nke a si eme?
1 Snow gbazee
2 CO2 absorption ọmụmụ
Okpomoku nke uwa karia nihi na oku nke carbon dioxide nke omume mmadu weputara. Mmanụ na-ere ọkụ, unyi na gas ha na-ewepụta ikuku gas nke na-eme ka okpomọkụ nke ụwa dịkwuo elu, nke a na-emekwa ka snow gbazee tupu oge ya. Dika ihu igwe nke uwa na agbanwe, enwere ngwa ngwa nke ufodu dika ichapu akuko polar, ịrị elu nke oke osimiri na mmuba na oge nke ihe ojoo.
Iji mata nchikota nke ikuku carbon dioxide n’ikuku, agha aghaghi idozi ihe di iche site na ihe anaputa na ihe nke osisi puru ime nke photosynthesis na ihe ndi ozo nke CO2 n’ime oke osimiri.
LA maara oke ohia dị ka sinks dị mkpa maka CO2, ma ha na-adabere kpam kpam na oke snow ha nwere, ebe ọ bụ ihe na-ekpebi maka absorption nke CO2. Karịa snow ha nwere, obere CO2 ha ga-amata, ọ bụ ezie na ha na-egosipụtakwa okpomọkụ.
CO2 absorption ọmụmụ
Iji nyere aka ịkọwa mgbanwe ndị na-ebute carbon, ESA's GlobSnow oru ngo na-eji data satịlaịtị iji mepụta map mkpuchi snow kwa ụbọchị maka Northern Hemisphere niile n’agbata 1979 na 2015.
Mmalite nke uto ihe ọkụkụ na oke ohia na-aga n'ihu site na nkezi ihe dị ka ụbọchị asatọ n'ime afọ 36 gara aga. Nke a na - eduga na ahịhịa nwere ike ijigide karịa CO2 ozugbo snow gbazee. Ndi otu ndi sayensi choputara nka banyere ihu igwe na ihe mmuta di anya, ndi ndi Finnish Meteorological Institute duziri.
Mgbe ha nwetara ozi a, ha na agwakọta ya na mgbanwe nke carbon dioxide n’etiti usoro okike na ikuku dị n’ọhịa Finland, Sweden, Russia na Canada. Ozugbo ha mere nke a, ndị otu ahụ mechara chọpụta na atụmanya a na-atụ anya ya n'oge opupu ihe ubi emeela ka njigide 3,7% karịa CO2 karịa nke mbụ. Nke a na - eme ka mwepụ nke ikuku anwuru CO2 na ikuku nke mmadụ mere.
Tụkwasị na nke ahụ, nchọpụta ọzọ nke otu a bụ na ọdịiche dị na ngwa ngwa mmiri na-apụta n'ụzọ pụtara ìhè n'oké ọhịa nke Eurasia, nke mere na mmụba nke CO2 na mpaghara ndị a dị okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere oke ọhịa. Ndị America.
“Satellite data ekerewo òkè dị oke mkpa n’inye ihe ọmụma banyere mgbanwe nke okirikiri carbon. Site na ijikọta ozi satịlaịtị na nke ụwa, anyị enweela ike ịgbanwe echiche nke gbazee snow ka ọ bụrụ ozi dị elu karị gbasara mmiri ọkụ fotoyntetị na mmiri carbon, "ka Prọfesọ Jouni Pulliainen kwuru, onye duuru ndị otu nyocha na Meteorological Institute. Asụsụ Finish.
Nsonaazụ ndị enwetara na nyocha ndị a ga-eji mee ka ụdị ihu igwe dị mma na ịkọ amụma banyere okpomoku ụwa. Dika ozi ndi sayensi nwere banyere oru nke usoro okike na mgbanwe nke okwu ha na ike ha na ikuku, ka mma ịkọ amụma na ha ga-akwado maka ọnọdụ mgbanwe ihu igwe ọhụrụ na-echere anyị.
Ọ dị mkpa ịmịnye ozi iji mepụta atumatu ga-enyere anyị aka imebi mgbanwe ihu igwe ma ọ bụ imeghari na ọtụtụ mmetụta ọjọọ ya na ọha mmadụ. Ọmụmụ ihe a na-anọchi anya ya ọganihu na ubi nke CO2 absorption.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Agbaze snow nwere ike inyere obere mgbanwe ihu igwe aka
Itinye ego na akụrụngwa akụrụngwa bụ isi ihe iji mee ka mgbanwe ihu igwe dị mma
Enwere ike inwe obere Ice Ice?